MUHIIM: Chelsea Oo Saxeexeedii Koowaad Ee Xagaaga Heshiis La Gaadhay & Booska Uu Ka Ciyaaro - GOOL24.NET
MUHIIM: Chelsea Oo Saxeexeedii Koowaad Ee Xagaaga Heshiis La Gaadhay & Booska Uu Ka Ciyaaro
May 19, 2022 Apdihakem Omer Adam
Kooxda Chelsea ayaa u muuqata mid gacanta kusoo dhigtay saxeexeedii ugu horreeyay ee suuqa xagaaga xilli ay isku diyaarinayso suuq ay isbedelo waaweyn ku samayn doonto safka kooxdeeda.
Sida uu sheegayo il-wareedka GOAL, Chelsea ayaa isku diyaarinaysa bixitaanka daafaceeda dhexe ee Antonio Rudiger kaas oo ku biiraya Real Madrid, Blues ayaa bedelkiisa doonaya saxeexa daafac dhexe oo heer sarre ah.
Sida uu isla il-wareedkaasi sheegayo, Chelsea ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaadhay daafaca Sevilla ee Jules Kounde oo ay doonayaan inay ka dhigaan saxeexooda koowaad marka la dhammaystiro heshiiska uu ku iibsanayo kooxda Todd Boehly.
Kounde ayaa noqday mid kamida xiddigaha ugu wanaagsan booskiisa da’yarta Yurub isaga oo 130 kulan soo metelay Sevilla tan iyo markii uu kusoo biiray 2019 isla markaana la qaaday Europa League 2020 halka uu xilli ciyaareedkan ka caawiyay inay booska afraad kaga dhammaystaan La Liga.
Chelsea ayaa saxeexiisa doonaysay xagaagii 2021 iyaga oo sidan oo kale heshiis isaga ula gaadhay kahor inta aysan xilli dambe lacagta ay iibkiisa ku doonaysay kor u qaadin Sevilla.
Sevilla ayaa haatan 59 Milyan oo pound ku doonaysa iibka Kounde, kooxda uu hormoodka u yahay macalin Julen Lopetegui ayaa doonaysa inay xilli horeba iibiso si ay suuqa uga hesho bedelka ku haboon.
Mulkiilaha cusub ee Chelsea ee Boehly ayuu il-wareedka Football.London sheegay inuu yahay mid hammi weyn leh isla markaana uu suuqa ka taageeri doono tababare Thomas Tuchel.